Tsia. Famoahana Special Edition - Fanorenana Fanamarinana
Home Tsia. Special Edition 3
MANarahaba antsika amin'ny fanontana manokana voalohany
Amin'ny maha-faran'ny fahavaratra azy, The Reward Foundation dia sahy nilaza fa manohana ny fampisehoana an'i Edinburgh amin'ny 'The Coolidge Effect'.
Ny Effect Coolidge avy amin'i Wonder Fools dia amin'ity herinandro ity ao amin'ny Theater Traverse any Edinburgh
Ny Foundation Foundation dia faly amin'ny fanohanana ny lalao vaovao mahafinaritra The Coolidge Effect by The Wonder Fools. Mamporisika anao izahay hizotra sy hahita izany. Ny antsipiriany ny daty sy toerana etsy ambany.
Ao amin'ny 2017, mitombo ny pôrnôgrafia amin'ny taham-pahaizana manokana: ao Royaume-Uni fotsiny, mihoatra noho ny 7 tapitrisa isam-bolana no hita isan'andro. Rehefa mihamitombo ny fidiran'ny fiarahamonina amin'ny sary mamoafady, dia mety tsy te hiresaka izany isika. The Coolidge Effect mikasa ny hanapaka ity taboo ity.
Ao anatin'izany no miteraka ny sary vetaveta amin'ny Internet ho toy ny indostria dolara amerikana The Coolidge Effect. Ity tranga voajanahary ity, izay tsy fahampian'ny tetik'asa momba ny natiora, dia natao hampahafantarantsika ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny 'novelantsika' rehefa hiseho ny asam-pamokarana ataontsika. Izy io dia miasa fanolorana fandeferana, na ny fahasosorana, ny olona iray na ny fanentanana izay lasa tsy dia mahafa-po 'ny ati-doha voalohany. Rehefa mandeha ny fotoana dia tsy dia misy faniriana firy amin'ny mpiara-belona amintsika ihany.
Nalaina avy amin'ny dinidinika tamin'ireo mpisolovava vetaveta, mpitsikilo, manam-pahaizana momba ny fahasalamana ara-pahasalamana, mpanabe sy mpahay siansa malaza amin'ny pôrnôgrafia, dia voalaza amin'ny alalan'ny rakitsoratra 4 mifampiankina: George, tanora mpilalao gameboy; Gary, raim-pianakaviana maty noho ny fiankinan-doha; Gail, mpamokatra pôrnônika mpamindra pejy ary Retrospect, mpidoroka amin'ny pôrnôgrafia izay te-hahalala anao.
The Coolidge Effect mampiasa fifangaroana mifangaro amin'ny fitantarana, tononkalo ary siansa hijerena ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny fahasalamantsika ara-tsaina, ny fifandraisana ary ny traikefa ara-nofo. The Wonder Wools, vondrona mpilalao sarimihetsika mampientanentana sy mahaliana, dia nahatakatra ity tranga tamin'ny andro maoderina ity ary namadika azy io ho toy ny lalao vaovao mampihetsi-po sy mampihetsi-po.
Ny fampisehoana dia nomena Fanolorana manokana ho ampahany amin'ny "The Suitcase Prize" tao amin'ny New Wolsey Theatre any Ipswich tao amin'ny PULSE Festival tamin'ny taona 2017. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ireto toerana manaraka ireto:
Traverse Theatre, Edinburgh: 20-22nd Septambra 2017
Tron Theatre, Glasgow: 27-30 Septambra
Macroberts Arts Center, Stirling: 20 Oktobra
Diorama New Theater, London: 15 Novambra
Tickets et Information: wonderfools.co.uk